Fanahy Kalifornia - Ny loza izay mandrahona - fihenan'ny fanjakana
Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tao anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divy masina voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranon'izy ireo dia nanomboka nitomany menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha mbola nisy ny hazo fijaliana sy sarivongan'i St. Pio blun. mihantona ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts. Satria ireo sary ireo dia nanomboka nahasarika olona maro ho any an-tranony tany am-boalohany, nanaiky ny tale jeneraliny ara-panahy fa mijanona tsy mitonona anarana izy ireo). Io fahagagana io no nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana ara-sakramenta.
Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny
feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ny tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Saint-Michael Michael Arkanjely ary am-polony ny valiny avy any amin'ny Our Lady, eo alohan'ny fankalazana. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy “Tsy hitsahatra hiresaka aminao izao aho, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao.”Nahatsiaro ny fiantsoan'izy mivady ny hanomboka ny fahitana ny Fikambanan'ireo Mpikambana an'i Marian izay handinihany ny hafatry ny Our Lady to Fr. Stefano Gobbi . Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga, ” ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Lady-ntsika Fr. Stefano Gobbi , "Ho an'ireo pretra malalantsika zanakay." Na ny mpivady dia mijaly mafy noho ny ministerany, fa atolotry ny Tompo hatrany izany ho famonjena ny fanahy. Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.
Tamin'ny 20 aogositra 2020, ity fanahy any Kalifornia ity dia "nahita" ny laharana 488 tamin'ny Boky manga, hafatra nomena am-boalohany Fr. Stefano Gobbi tamin'ny 11 febroary 1993 tao Sao Paulo, Brezila tamin'ny tsingerintaona nahitana ny Mompera Lourdes:
Loza izay atahorana
Jereo anio ny famirapiratan'ny Reninao any an-danitra, izay niseho tao Lourdes ho toy ny fiheverana tsy mety. Niseho aho mba hanambara aminao fa niditra tamin'ny fotoan'ny fisehoako feno ianao. Niseho aho mba hanondro aminao ny lalana tokony halehanao amin'izao fotoan-dehibe izao. Niseho aho mba hanatontosana ny adidiko amin'ny raharanao, ry zanako, mba ho voafandrik'i Satana sy ny anao aho. Amin'ny fotoam-pitsapana lehibe, dia manondro aminao ireo loza izay mampihorohoro anao aho.
Ny loza voajinja dia ny fanolorana ny fampitondrana izao tontolo izao misy anao; ny fahatongavan'ny ota sy ny ratsy; ny fiverenana amin'ny fanandevozana eo ambany satana sy ny heriny mihoa-pampana. Ary noho izany dia nasehoko anao ho toy ny tsy fahatsapan-tena maloto aho, izany hoe, ilay hany andriamanitra izay mbola tsy nahalala ny aloky ny ota, fa tsy ny ota tany am-boalohany, izay nifandraisan'ny olona rehetra tamin'ny fotoana nanaovany ny maha-olombelona azy. Ary nanasa taminao ny fanasana an-dreniko aho handeha amin'ny lalan'ny hatsaram-panahy sy ny fahasoavana, ny fahadiovana sy ny fanetren-tena, ny fitiavana ary ny fahamasinana lehibe kokoa. Izaho koa dia nangataka anao hampiasa ireo fomba izay tena ilaina amin'ny fandehanana amin'ity lalana sarotra ity: ny fivalozana ary ny sakramentan'ny fampihavanana.
Ny loza iray hafa manohintohina anao dia ny mamela ny tenanao hiatrika hetsika ambany, ary manadino ny hery mahery izay entin'ny vavaka amin'ny fahazoana ny fahasoavan'ny fiovam-po ho an'ny zanako maro mpanota mahantra. Ary noho izany dia nanasa anao hivavaka betsaka aho ho an'ny fiovam-po amin'ny mpanota, amin'ny alàlan'ny fanehoako anao, amin'ny alàlan'ny Bernadette zanako vavy, fa ny vavaka mahomby indrindra, ny vavaka izay tena tian'ny ahy dia ny Holy Rosary.
Ary farany, dia misy ny loza mitohy tsy an-kijanona, mamela ny tenanao ho tratry ny fahakiviana sy ny tsy fahampian'ny fahatokisana, ka mampihena anao amin'ny fahitana ara-panahy marina. Ary noho izany dia naniry koa aho haneho ny tenako ho fanafody ho an'ny aretina, ho fanampiana amin'ny filanao, ary fanohanana amin'ny fahalemen'olombelona. Nanasa anao handeha sy hisasa eny amin'ny loharano aho, miaraka amin'ilay rano izay nataoko hitsangana amin'ny fomba mahagaga avy amin'ny vatolampy nisehoako. Androany, ankehitriny fa efa tonga ny fotoan'ny Fitsarana lehibe, averiko aminao indray ny fanasana an-dreniko mba hanaraka ahy amin'ny lalan'ny fahasoavana sy ny fahadiovana, ny fivalozana ary ny vavaka, hahazoana ny fanomezana ny fanasitranana sy ny famonjena.
Posted in Fanahy any Kalifornia, Messages, Ny fotoan'ny fahoriana.
← Pedro Regis - Aza…
Iza no tena Fr .. →